I-Black Calacatta Quartz Surfacing ( Into No. Apex 8869)
I-Black Vein Calacatta itshe le-quartz
Amakhishi ahlanzekile amhlophe ane-quartz countertop APEX-6601...
Imikhiqizo yethu inzuzo super emhlophe quartz itshe APEX...
Ama-countertops amatshe e-quartz yesimanje APEX-5112
Ukuthengisa okushisayo kwetshe lequartz lekhwalithi ephezulu APEX-6608
I-Quartz Stone isetshenziselwa kakhulu i-countertop, i-top kitchen, i-vanity top, i-table top, i-kitchen island top, i-shower stall, i-bench top, i-bar top, i-wall, i-floor njll. Konke kwenziwa ngokwezifiso.Plz xhumana nathi!
Inkokhelo 1) 30% wenkokhelo yangaphambi kwesikhathi ye-T/T nebhalansi engu-70% T/T uma iqhathaniswa ne-B/L Copy noma i-L/C lapho uyibona.2) Eminye imigomo yokukhokha iyatholakala ngemuva kokuxoxisana.
Yonke imikhiqizo ingaphansi kolawulo lwethu oluqinile lwekhwalithi.Siyakuqinisekisa ukuthi esikunikezayo kuyimikhiqizo ephezulu nekhwalithi.Kusukela ekuqaleni kokukhiqizwa kuya ekuhlolweni kwempahla eqediwe, sinaka yonke imininingwane futhi sizama konke okusemandleni ethu ukugwema noma imaphi amaphutha ngokucophelela.Yonke imikhiqizo ingaphansi kolawulo lwethu oluqinile lwekhwalithi.
Siyakuqinisekisa ukuthi esikunikezayo kuyimikhiqizo ephezulu nekhwalithi.
Kusukela ekuqaleni kokukhiqizwa kuya ekuhlolweni kwezimpahla eziqediwe,
sinaka yonke imininingwane futhi sizama konke okusemandleni ethu ukugwema noma yimaphi amaphutha ngokucophelela.
Iqembu lochwepheshe lekilasi lokuqala kanye nesimo sengqondo senkonzo yeSincerest
1. Ngokwesisekelo solwazi lwemakethe, siqhubeka nokufunela amakhasimende ezinye izindlela.
2. Amasampula wamahhala ayatholakala ukuze amaklayenti ahlole okokusebenza.
3. Sinikeza imikhiqizo ye-OEM ephakeme kakhulu yokuthenga okukodwa.
4. Sinikeza insizakalo enhle kakhulu yangemva kokuthengisa.
5. Sinelabhorethri ye-R&D yokusungula into ye-quartz njalo ezinyangeni ezi-3.
Mayelana nokupakisha (20"ft isiqukathi)
Okwedlule: Ubunjiniyela Bekhwalithi Ephezulu I-Calacatta White Quartz Stone Slab APEX-8868
Olandelayo: Itshe le-quartz elimhlophe le-calacatta (Into NO. 8872)
I-quartz emhlophe ye-Calacatta ( Inombolo yento: I-Apex 8829)
umkhiqizo omusha we-quartz countertop wekhithi...
Idizayini Yangokwezifiso Itshe / into: APEX-8829...
iziqongo zesimanje zequartz APEX-8816
I-Quartz Stone Countertops emhlophe Yekhishi, Ikhishi...
I-Superior Calacatta ( into No. Apex 8856)
Itshe lequartz elimpunga IQuartz Marble Price IQuartz Countertops engcono kakhulu yomkhiqizo Intengo yeQuartz Countertops AmaQuartz Countertops Slabs IEngineered Stone Market